Varotra ambongadiny ho an'ny fanatanjahan-tena an-kalamanjana Sun Visor ho an'ny lehilahy sy ny mpanamboatra sy ny mpamatsy | , resintsika noho ny
2. Esory tsy ho hitan'ny masonao ny masonao: marary ve ianao ary reraky ny masoandro mahazo ny masonao, nefa manajamba anao vetivety fotsiny. Izay no nahatongavantsika teto. Ireo satroka visor unisex azo ovaina ireo dia hitazona ny masonao tsy hahita ny masonao, ary tena milay rehefa manao izany koa.
3. Tsara ho an'ny hetsika ara-panatanjahantena sy an-kalamanjana: Ity ovavahady sseranana sla visor hats dia natao ho maivana, afaka miaina ary mahazo aina. Tsy hanakantsakana anao mihitsy izy ireo, ka izy ireo no fitaovana tsara indrindra hivezivezy, jogging, fanatanjahan-tena ary hetsika hafa any ivelany.
4. Fitaovana manara-penitra Premium: Raha momba ny anay ovavahady sseranana sla visor hamin'nys, izahay dia mamaritra fa tsy hampiasa afa-tsy ny lamba landihazo voajanahary tsara indrindra, ary koa ny fizotran'ny famokarana manara-penitra sy ny fifehezana kalitao henjana.
5. Fitaovana lamaody sy lamaody: ovavahady sseranana sla visor hats s dia mihoatra ny fomba hiarovan-tena amin'ny masoandro, na sombin-fitaovana fanatanjahan-tena. Izy ireo dia tena lamaody lamaody lamaody, ary fomba tsara hanatsarana ny fanatanjahantena an-drenivohitra na ny fomba mahazatra.
ara-nofo landihazo Fitaovana hafa mifanaraka amin'ny fangatahan'ny mpividy.
Size 58 sm Na namboarina
Loko Lemon mavo Misy loko mahazatra (Loko manokana misy amin'ny fangatahana, miorina amin'ny karatra loko pantone)
Famantarana amboradara Izy io dia mety amin'ny pirinty, Patchwork, 3D Embroidery, haavo matetika misy
Fikatonana aoriana Fanidiana ny Hook sy Loop Karazana fanidiana ny tadin-damosina hafa azo namboarina
Toetoetra: Lamba landihazo madio, hatsembohana fanamainana haingana ny hygroscopic, fanoherana ny bakteria ary ny fametahana tarehy.
Fampiasana Fitsangatsanganana, fitsangatsanganana an-tendrombohitra, any ivelany, fialamboly sns.
Ora nanomezana 1. Fotoana santionany: 7-15 andro fiasana
Fepetra fandoavana Famindrana telegrafika T / T (fametrahana 30% mialoha rehefa voamarina ny filaminana, mandanjalanja alohan'ny fandefasana)
fanamarihana 1. Ny fitaovana, loko, fomba ary famaritana ny ovavahady sseranana sla visor hats azo atao arakaraka ny takinao.
2. Andian-tsarimihetsika: Satroka lamaody, ovavahady fanatanjahan-tena sla visor hats, Satroka doka, satroka baseball, satroka miaramila, satroka harato, satrok'akanjo, satroka ririnina, satroka sifotra camouflage, satrasana nosasana, satroka mpanjono sns.
3. Mamaly izahay araka ny fanontanianao farany tato anatin'ny 12 ora.
4. Azo antoka miaraka amin'ny kalitao azo antoka sy serivisy aorian'ny fivarotana, ho faly ianao mahita fa ny manafatra mivantana avy aminay dia tena mora sy tsotra rehefa mividy amin'ireo mpamatsy eo an-toerana nefa misy vidiny mirary sy safidy maro hafa.
★ Tongasoa ny kaomandy OEM anao momba ny satroka visor masoandro fanatanjahan-tena any ivelany.
ambany Misy satroka visor sun sports hafa any ivelany, raha mahaliana anao izany dia alefaso aminay ny kaody, raha tsy manilika anao satroka sun visor ara-panatanjahantena ivelany dia alefaso aminay ny fahamendrehanao na ny santionanao.
1. Manakaiky ny seranan-tsambo Qingdao, mila adiny iray fanamainana izy, miaraka amin'ny fitaterana seranan-tsambo tsara kokoa ho an'ny satrin'ny masoandro manjono any ivelany.
3.Ny orinasa dia mandrakotra velaran-tany 13000 metatra toradroa, miaraka amin'ireo mpiasa efa ho 300, noho izany, azo antoka ny vokatra sy ny fotoana fandefasana ny satroka masoandro manjono eny ivelany;
4.Efa nandalo ny fanamarinana rafitra kalitao ISO9001, ny fanamarinana WRAP any Etazonia ary ny fanamarinana fanombanana tombantombana ho an'ny orinasa VV fanamarinana iraisam-pirenena. Izy io dia famolavolana endrika, famokarana, varotra ary iray amin'ireo mpanamboatra satroka matihanina.
Teo aloha: Cap UPF any ivelany 50+ Fanjonoana masoandro miaraka amina vozona
Manaraka: Sarin'ny lehilahy Dada Baseball Cotton Baseball
Satroka landihazo zaza
Satroka Masoandro Fanjonoana
Masoandro manjono masoandro
Azo averina miaina ...
Trano an-trano aleon'ny lohataona ririnina ...
Fanjonoana fahavaratra & ...
Fomba famantarana ny marika marika ...
Ririnina malefaka mafana mangatsiaka ...